Qaybo ka mid ah mashiinnada jiifa
Qaybaha Gawaarida Gawaarida
Khatimidii Farsamada iyo qaybo
Waqtiga boostada: Jan-23-2021
Gacaliyeyaasha shuraakada ah ee ganacsatada iyo alaab-qeybiyeyaasha, Muddooyinkii ugu dambeeyay, waxaa la ogaaday inay jiraan shirkado iyo shaqsiyaad si sharci-darro ah u isticmaala magaca iyo cinwaanka shirkaddayada (Shijiazhuang Mets Machinery co., Ltd NO.1 Changjiang Road Shijiazhuang 050035 Hebei China Tel: 86-311-68058177 ) iyo shirkadda kale ee ...Akhri wax dheeraad ah »
Waxaan u hambalyeynayaa asxaabta waaxda farsamada ee ku guuleystey shaaha farsamada
Abaalmarinta Kooxda Waan u hambalyeynayaa asxaabta waaxda farsamada ee ku guuleystey abaalmarinta kooxda farsamada depart waaxaha kale ayaa raaci doona tusaalahooda. Akhri wax dheeraad ah »
Guga ayaa imanaya, waa wakhti lagu raaxeysto!
Guga ayaa imanaya, waa wakhti lagu raaxeysto! Dhammaan la-hawlgalayaasha shirkadda ayaa ku soo ururay isgoyska wadada jianhua iyo wadada labaad ee woqooyi. Wadadeena Baaskiil wadista waxay ahayd dhibic uruurinta-qaadashada wejiga Hutuo River-Zhengding South Gate-Raad-raac tallaabooyinkeenna iyadoo qof walbaa uu baaskiil watay. Waxaan la sheekaysanay e ...Akhri wax dheeraad ah »
Wax soo saarka deegaanka
Shirkadeenu waxay u hoggaansameysaa fikradda ah saaxiibtinimada deegaanka iyo ilaalinta kheyraadka. Dhawaan xaaladda ilaalinta deegaanka waa mid xun, shirkadeena ayaa si wanaagsan uga jawaabeysa waxayna fulisaa wax soo saarka ilaalinta deegaanka. 1. In la tirtiro tas-hiilaadka duugoobay lana soo bandhigo horumarsan ...Akhri wax dheeraad ah »
Ku dabaaldeg shahaadada laba-laabnaanta shirkadeena si taxaddar leh.
Hebei Hanchang Macdanta Co., Ltd. waxay dhaaftay shahaadada nidaamka maaraynta tayada ee ISO9001, shahaadada nidaamka maamulida caafimaadka iyo badbaadada shaqada ee OHSAS18001 bishii Sebtember 1, 2017. Waxay muujineysaa in shirkadeena ay gaartay heerka caalamiga ah ee isku dhafka maareynta kala duwan ...Akhri wax dheeraad ah »
Sidee loo doortaa bamka lagu shubo?
Markaad wax ka qabanaysid slurries, isticmaalayaashu had iyo jeer waa inay kala doortaan inta udhaxeysa caag-ka ama dhismaha birta bambooyinkooda. Shaxda 1 ee gabagabada qodobkan ...Akhri wax dheeraad ah »
Qaybaha bamka lagu shubo
Dareeraha Qalabka, elastomer ama walax-chrome sare, waa qaybta ugu weyn ee wareega oo caadi ahaan leh faanooyin si ay u siiso awoodda bartamaha dareeraha. Qaybaha Casing Split Split dibadda ee kabka waxaa ku jira khadadka xirashada waxayna bixiyaan awooda cadaadiska hawlgalka sare. Shaashadda sha ...Akhri wax dheeraad ah »
Ku soo dhawow macaamiisha ajnabiga ah inay soo booqdaan shirkadeena! Akhri wax dheeraad ah »
Horumarinta warshadaha saar iyo dib u eegis
Warshadaha bamka 1.1 waxay leeyihiin taariikh fog Bamku waa mashiinkii hore. Wadamada yurub wershad heerka ugu horeysa samaysa ayaa la dhisay badhtamihii qarnigii 20aad, in ka badan 10 sida shirkada Wortington ee Maraykanka ayaa la dhisay 1980, Ingersoll Rand-shirkadda waxaa la dhisay 1860, Byron-Jackson comp ...Akhri wax dheeraad ah »
Sidee buu u shaqeeyaa bamka slurry centrifugal?
Sida bambooyinta badankood, mashiinka centrifugal wuxuu tamar farsamo ka beddelaa mootada una beddelaa tamar dareeraha dhaqaaqaya; qaar ka mid ah tamarta waxay galaan tamarta dareeraha dhaqdhaqaaqa dareeraha, qaarna tamar tamar leh, oo ay matalaan cadaadiska dareeraha ama iyadoo dheecaanka ka soo horjeedka culeyska kor loo qaado heer sare. Wixii dheeraad ah ...Akhri wax dheeraad ah »
Cinwaanka: Dabaqa 22, Xingji Future City B, No.155 Changjiang Road, Shijiazhuang, Gobolka Hebei, Shiinaha